Nye onyinye - BullyingCanada
Imesapụ aka gị ga-azọpụta ndụ.
Site n'inye onyinye nlebara anya, ị ga-enye ụmụaka a na-akpagbu ọdịnihu dị mma.
Ọrịa ọjọọ ahụ ahapụla ụmụaka ndị na-akụda mmụọ. Mgbe a na-akpagbukwa ha, a na-akwanyekarị ha n'ọnụ mmiri. Site na nkwado gị nke ọma, anyị ga-ahụ na ọrụ nkwado anyị nọ maka ha n'oge ọ bụla, ụbọchị ọ bụla, n'efu, iji kwụsị mmegbu ha.
Pịa ebe a iji nye onyinye nlekọta taa!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibipụta fọm onyinye, dejupụta ya ma ziga ya BullyingCanada, budata akwụkwọ onyinye gị Ebe a. Adreesị nzipu ozi anyị bụ 471 Smythe Street, PO Box 27009, Fredericton, New Brunswick, E3B 9M1.
afọ ọrụ nyere site BullyingCanada
Anatara akwa akwa maka enyemaka na 2021
Ọtụtụ oge mkpu enyemaka natara ma nyere aka na 2021, ma e jiri ya tụnyere tupu ọrịa 2019.
Nkezi ọnụọgụ nkeji onye ntorobịa na-echere ruo mgbe ya na onye nzaghachi nkwado na-ekwurịta okwu
nde mmadụ na-eleta BullyingCanada.ca na 2021
Ọnụọgụ asụsụ ndị ahụ BullyingCanada.a na-enye n'ime
Ụzọ ndị ọzọ iji gosi nkwado nlekọta BullyingCanada
Bụrụ onye nzaghachi nkwado, ma ọ bụ nyere aka na ọrụ nhazi. Anyị ji oge gị na nkà gị kpọrọ ihe!
Mee ihe na-atọ ụtọ iji nweta ego BullyingCanada!
Binye nkwado ụlọ ọrụ gị ma bụrụ onye amara maka ịbụ nwa amaala ụlọ ọrụ na-ahụ n'anya!
Nnukwu onyinye na onyinye nke nchekwa ndị nwere ekele maka enyemaka BullyingCanada na-aga n'ihu n'ọchịchọ na-eto eto maka enyemaka anyị.
Ochie ma ọ bụ ọhụrụ, na-agba ọsọ ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ dị mfe ụgbọ ala na-achọghị na nkwado sitere n'obi maka ụmụaka a na-emegbu!
Onyinye emere site na uche gị, mkpuchi na nchekwa ezumike nka ga-akwado ndị ntorobịa na-adịghị ike maka ọgbọ na-abịa!
Daalụ na-aga ndị na-akwado anyị kacha mmesapụ aka!
Gaa na ibe ndị nkwado anyị ka ị kwụọ ndị isi nyere anyị onyinye!
Chọrọ iwepụta oge gị?